साथ जुटेको तर साइत नजुरेको श्री मुक्तिनाथको यात्रा–२ | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७८ बैशाख २०, सोमबार १५:१५ गते
करिब साँझको सात बजेतिर हामी तातोपानी भन्ने स्थानमा आइपुग्यौँ । तातोपानीमा नुहाउने हाम्रो कार्यक्रम थियो । मुक्तिनाथको एक सय आठ धाराहरु र दुईवटा कुण्डमा नुहाएपछि तातोपानीमा नुहाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कथन रहेको छ । सोहीअनुरुप चुननारायण श्रेष्ठज्यू र म नुहाउन लाग्यौँ । एकछिनको अन्तरालमा अरूणकुमार पियाज्यू, सहनलाल प्रधानज्यू र वन्दना भाउजू आइपुग्नुभयो । हामी नुहाएर निस्कने बेला भइसकेको थियो । गाडीको अवस्थाले हामीलाई चाँडै बेनी पुग्नु थियो । त्यसैले, उहाँहरुलाई बिस्तारै आउँदै गर्नु भनी हामी बेनीका लागि प्रस्थान ग¥यौँ । यहाँ अर्को मह¤वपूर्ण कुरा स्मरण गर्न चाहेँ– बिग्रिएको गाडी बनेपछि हामी जब नाउरीकोटका लागि प्रस्थान गरेका थियौँ, त्यसको लगत्तै इन्डिकेटरमा चेक भनेर सिग्नल आएको हामीले देखेका थियौँ । यसैले गर्दा हामी जतिसक्दो चाँडो बेनी पुगेर वर्कसपमा गाडीलाई चेक गराउनु थियो । तर, दुर्भाग्य फेरि आइलाग्यो ।
बेनी आइपुग्न करिब १.६ किमी बाँकी रहँदा हाम्रो गाडीले पुनः लार्जुनमा भोगेको समस्या दोहो¥यायो । अब गाडी अगाडि नबढ्ने निश्चित भयो । धन्न साँघुरो बाटो कटेर फराकिलो बाटोमा गाडी रोकिएको थियो, त्यो पनि खोलाले बाटो काटेर पहिरो गएको ठाउँमा । रातको नौ बजिसकेको थियो । मैले पूर्वअध्यक्ष रोटरियन सहनलाल प्रधानज्यूलाई मोबाइलबाट खबर सुनाएँ । उहाँहरु केहीबेरपछि उक्त ठाउँमा आइपुग्नुभयो । अर्को गाडीले हाम्रो गाडीलाई तानेर बेनी पु¥याउनुको विकल्प थिएन । त्यसैले, उहाँहरुलाई बेनी पठाएर तानेर ल्याउने गाडीको व्यवस्था गर्नका लागि अनुरोध ग¥यौँ । सोहीबमोजिम उहाँहरुले करिब राति १० बजेतिर एउटा गाडीको व्यवस्था गरेर ल्याउनुभयो र गाडी तानेर हामीलाई बेनीको वर्कसपसम्म पु¥याउने व्यवस्था भयो ।
घरबाट निस्कने बेलामा “तीन जना ननिस्कनु”, हिँड्न लागेको बेलामा “कहाँ जान लागेको ?” भनेर नसोध्नु अनि “आज नजाऊ बस, भोलि जाऊँला” नभन्नु, साइत पर्दैन भन्ने कथन छ । यस्तै भयो हामीलाई पनि । नारायणगढबाट मुक्तिनाथसम्मको यात्रामा म, चुननारायण श्रेष्ठ र सहनलाल प्रधान गरी तीन जना थियौँ । बाटोमा यात्रा गर्दै गर्दा साथीभाइले नारायणगढबाट फोन गरेर हामीप्रतिको माया, चिन्ता र सायद राति अबेर भइसकेर होला त्यतै बस भन्थे । त्यस्तै हुन गयो र बास बस्नैपर्ने भयो । हामीले बिग्रेको गाडीलाई बेनीमा रहेको वर्कसपमा पु¥याएका थियौँ । वर्कसप अल्लि माथि उकालोमा थियो । वर्कसपमा कोही नभएकोले गाडी छोड्नका लागि गेट हामी आफैँले खोल्यौँ । अल्लि अगाडि दोस्रो गेट पनि रहेछ । तानेर लाने गाडीको ड्राइभरले दोस्रो गेट रोजेछन् ।
बिग्रेको गाडीमा चुननारायण श्रेष्ठ थिए । सहनलाल प्रधानज्यू र म वर्कसपअगाडि रहेको होटलमा खाजा खाइरहेका वर्कशसका कर्मचारीलाई बोलाउन गएका थियौँ । चुननारायण श्रेष्ठज्यूको फोन आयो, के भयो भनी सोध्दा “गाडी खाल्डोमा खस्न लाग्यो, चाँडो आऊ” भने । हामी दौडिएर पुग्यौँ । पछाडि देब्रेतिरको एउटा चक्का खाल्डोमा जाकिन लागेको रहेछ । हामीले बल लगाएर गाडीलाई अल्लि माथि धकेल्यौँ । तानेर लाने अर्को गाडीले पनि जोड लगाउँदै थियो । अल्लि बेस्सरी जोड परेछ, गाडीले फेरि अर्को नोक्सानी बेहोर्न पुग्यो । वर्कसपमा रहेको फलामले बनेको भ¥याङमा अगाडिको फेन्डरले छोयो र चक्का त्यहीँ अड्कियो । भएन फसाद ! अब गाडी त्यत्तिकै छाडेर जानुपर्ने भयो । धन्न वर्कसपको हेड मिस्त्री आइपुगे । उहाँलाई सम्पूर्ण समस्या र अवस्थाबारे जानकारी गराएर गाडी जिम्मा दिएपछि हामी रातको करिब एघार बजे बास बस्ने होटल खोज्न हिँड्यौँ ।
दाजु अरूणकुमार पियाले नारायणगढमा रहेका मित्र राजेन्द्र ओलीसँग बेनीमा रहेका साथीहरुका बारेमा सोधपुछ गर्नुभएपछि बेनीका मित्र सुविन श्रेष्ठ (म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष)को नम्बर लिनुभयो । सुविन श्रेष्ठको नाम सुनेपछि मैले आजभन्दा करिब दस वर्षअगाडि ओलीजीमार्पmत नै उहाँलाई चिनेको अरूणकुमार पियाज्यूलाई बताएँ । उहाँ आइपुगेपछि पुराना यादहरु ताजा भए । हामीलाई एकआपसमा चिन्न समय लागेन ।
उहाँले हामीलाई होटल एभरेष्टमा लिएर जानुभयो । होटल नयाँ रहेछ । नववर्ष २०७८ वैशाखको १ गतेबाट सञ्चालनमा आउने होटलका साहूजीले हामीलाई सुनाए । भोक पनि बेस्सरी लागेको थियो । सुविनजीकै साथी, म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका सह–सचिव बाबुराम आचार्यको होटल याक एण्ड रेस्टुरेन्टमा हामीले खाना खायौँ । खाना खाँदै गर्दा नारायणगढबाट बेनीमा ड्राइभर पठाएर बेनीमा गाडी बनेपछि लिएर आउने र हामीचाहिँ ट्याक्सी रिजर्भ गरेर भोलि बिहानै सात बजे नारायणगढ जाने भन्ने निर्णय भयो । सुविनजीले ट्याक्सी रिजर्भ गरिदिनुभयो र बिहानका लागि तयार रहन अनुरोध भयो । हामी पनि सोहीअनुसार खाना खाएर केही दूरीमा रहेको होटल एभरेष्टमा गएर सुत्यौँ ।
भोलि बिहान एक घन्टा ढिलो गरी ट्याक्सी हामी बसेको होटलमा आइपुग्यो । अरूणकुमार पिया र उहाँकी धर्मपत्नी वन्दना पियाको बेनीमा आप्mनो व्यावसायिक काम भएको र बागलुङ हुँदै पोखरामा एक–दुई दिन बस्ने कार्यक्रम रहेकोले हामी तीन जना आप्mना सबै सामानहरु ट्याक्सीमा लोड गरेर गाडी बनाउन छाडेको वर्कसपमा गयौँ । त्यहाँ हेड मिस्त्री र सम्पूर्ण टेक्निसियन कर्मचारीहरु आइसकेका रहेछन् । हामी पुगेपछि हेड मिस्त्रीले गाडी एक घन्टामा बन्ने जानकारी गराउँदै हामीलाई गाडी लिएरै जानका लागि अनुरोध गरे । एक घन्टामा गाडी बन्ने भएपछि त्यही गाडीमा नारायणगढ फर्कने सल्लाह भयो र रिजर्भ गरिएको ट्याक्सीलाई केही रकम दिएर फर्कायौँ । पोखराबाट जहाजमार्पmत जोमसोमको वर्कसपमा मगाएको एउटा पुर्जा सोही बिग्रिएको गाडीमा थियो, जसको बारेमा हामीले अघिल्लो रात नै हेड मिस्त्रीलाई त्यो नयाँ पुर्जाले काम नगरेकोले त्यो पुर्जा फिर्ता गर्ने भनेका थिर्यौँ ।
बिहानीको समयमा हामी भोकै थियौँ र नास्ता खानका लागि वर्कसपबाट करिब २५० मिटरको दूरीमा रहेको होटलमा पुग्यौँ । जेरीपुरी खाएर करिब ४५ मिनेटको बसाइँपछि वर्कसप पुग्दा गाडी तयार हुन लागेको थियो । तर फेरि दुर्भाग्य भनौँ, हामीले अघिल्लो रात सम्झाएर फिर्ता गर्नुपर्ने भनिएको पुर्जा नै मिस्त्रीहरुले प्रयोग गरेछन् र सो पुर्जाले काम गरेन । सबै खोलेर बनाउन अर्को डेढ–दुई घन्टा लाग्ने भयो । समस्यामाथि समस्या ! अब अर्को विकल्प त थिएन, त्यसैले धैर्य गर्दै नयाँ पुर्जा जोड्नका लागि भनियो । अब भने गाडी बनेको खबर आयो । हामी खुसी भयौँ । हेड मिस्त्रीले हामीलाई गाडी टेस्ट ड्राइभमा समेत लानुभयो । तर, चेक भन्ने सिग्नल फेरि देखियो । वर्कसपमा फर्काएर जिपिएस सिस्टम जडान गरी गाडीको कन्डिसनबारे मोबाइलबाटै पत्ता लगाउन सकिने प्रविधिले हामीलाई सजिलो बनायो । मोबाइलबाटै सो चेक सिग्लन हटाइयो । अब भने हामी ढुक्क भयौँ र नारायणगढ फर्किनमा कुनै समस्या नहुने आभाष भयो ।
सम्पूर्ण ज्याला र बिलहरुको भुक्तान गरी हामी तीन जना नारायणगढका लागि बेनीबाट करिब बिहानको ११ः०० बजे निस्कियौँ । दाजु चुननारायण श्रेष्ठको कुशल ड्राइभिङमा सहनलाल प्रधानज्यू र म मस्त थियौँ । यात्रामा भएका तीतामीठा स्मरण सुन्दै, सुनाउँदै अगाडि बढ्दै थियौँ । पोखरा आइपुग्न लगभग दुई घन्टा बाँकी रहँदा अकस्मात् पछाडिको देब्रे टायरले धर्म छाड्यो । बम पड्किएजस्तो गरी आवाज निक्लिएको थियो । टायरका फलामे तारहरु निस्किएर ठूलो भ्वाङ परेको थियो । यतिखेर हामी तीनैजना तन र मन दुवैले थकित थियौँ ।
गाडी उठाएर टायर फेर्न सक्ने बल हामीमा बाँकी थिएन । धन्न ठाउँमै पड्किएछ । करिब पचास मिटरको दूरीमा टायर बनाउने दोकान रहेछ । त्यहाँका मिस्त्रीलाई बोलाएर टायर फेर्ने काम सम्पन्न भयो । सँगै होटल पनि रहेछ । भोक बेस्सरी लागेको थियो । दाजु सहनलाल प्रधानले घरबाट लगेको भुटेको चिउरा, तिलको अचार होटलको तरकारीसँग खायौँ । त्यहाँ आधा घन्टा समय बिताएर हामी अगाडि बढ्यौँ । यसपटक भने ड्राइभिङ सिटमा सहनलाल प्रधान हुनुहुन्थ्यो । म पछाडिको सिटमा थिएँ । मिटरमा रहेका सम्पूर्ण इन्डिकेटरहरु बेलाबेलामा हेरिरहन्थेँ । बेनीबाट हिँडेको केही समयपश्चात् नै चेक भन्ने सिग्नल देखाइसकेको थियो । मैले दुवैजनालाई यो कुरा भनिनँ । सुनाउँदा टेन्सन हुन्छ भनेर म चुप लागेर भगवान्लाई पुकार्दै यात्रा गरिरहेको थिएँ । पोखरापछि दमौली पुगेर खाजा खाने कार्यक्रम तय गरियो ।
तर, दमौलीमा हामीलाई खाजा खाने साइत जुरेन । डुम्रेभन्दा आठ किलोमिटरयतै दाहिनेतिरको डाँडामा एउटा राम्रो कफी सप देख्यौँ । त्यहीँ गएर आराम गर्ने र खाजा खाने भयौँ । चाउमिन र मःमः अर्डर ग¥यौँ । साथै, मीठो कफी पनि पियौँ । साँझ परिसकेको थियो । अब ढिलो गर्न हुन्न भनेर यात्रालाई अगाडि बढायौँ । डुम्रे कटेपछि अकस्मात् चेक सिग्लन हटेको देखेँ र म खुसीले चिच्याएँ । दाजु चुननारायण श्रेष्ठलाई त्यो सिग्नल पुनः देखिएकोबारे थाहा रहेनछ । तर, सहनलाल प्रधानज्यूले भने आपूmले गाडी हाँक्नुअगाडि नै त्यो सिग्नल देखेको सुनाउनुभयो । जे होस्, अब भने हाम्रो यात्रा सहज हुने देखियो । तीनैजना खुसी हुँदै यात्राको क्रमलाई अगाडि बढायौँ । तर, गाडीमा स्पेयर टायर भने हामीसँग थिएन । यसको चिन्ता भने बाँकी नै थियो । सीधै भन्नुपर्दा नारायणगढदेखि मुक्तिनाथसम्मको यो यात्रामा हामीले निकै दुःख पायौँ । तीन दिनका लागि भनेर निस्किएको मुक्तिनाथ यात्रामा हामी पाँचौँ दिनसम्म पनि बाटोमै थियौँ । तर, मिल्ने साथीभाइहरुको साथ र मुक्तिनाथ सेरोफेरोको प्राकृतिक सुन्दरताले हामीलाई सबै दुःख बिर्साएर मन्त्रमुग्ध बनाएको थियो । यो यात्रा हाम्रो मन–मस्तिष्कबाट कहिल्यै हराउने छैन । गाडी बिग्रिएर बोनसमा घुम्न पाइएको कागबेनी, छुसाङ, मार्फा गाउँ र नाउरीकोटको त्यो रोमाञ्चित र रमाइला क्षणहरु मानसपटलमा सदा अविस्मरणीय रुपमा रहिरहनेछ । स्पेयर टायरबिनाको चारपाङ्ग्रे गाडीमा हामी राति अन्दाजी दस बजेतिर आप्mनो बासस्थान नारायणगढमा आरामले आइपुग्यौँ । जय श्री मुक्तिनाथ !
(पूर्वअध्यक्ष, रोटरी क्लब अफ नारायणगढ)